विधानलाई अटेर गरी तोकिएको समयभित्र अधिवेशन नगर्ने एनसीसी उपर कारवाही के ? – PrawasKhabar
विधानलाई अटेर गरी तोकिएको समयभित्र अधिवेशन नगर्ने एनसीसी उपर कारवाही के ?
२०७८ साउन ७ गते १८:४८
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए/आइसीसी) काे दशौं विश्व सम्मेलन आउन अब ठ्याक्कै ३ महिना बाँकी छ। यतिबेला संसारभरका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले धमाधम अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिररेका छन् । जुलाइभित्रै अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने आइसीसीको विधानले निर्देश गरेको छ।
संघको संसोधित विधान २०२१ को धारा २४ मा प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषदको राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुने वर्षको जुलाई महिनाको १ देखी ३१ तारिख सम्म अनिवार्य रुपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ।
संघको सोहि विधान अनुरुप कतिपय एनसीसीले नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेका छन्। केही अधिवेशनको अन्तिम तयारीमा छन्। तर, केही एनसीसीले भने अहिलेसम्म पनि अधिवेशनबारे सचिवालयलाई कुनै जानकारी समेत नगराएको पाइएको छ ।
अधिवेशनको मितिबारे केही देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले जानकारी नै नगराएपछि सचिवालयले बिहिवार पुनः सूचना गरेको छ । सूचनामा अधिवेशन मिति तोकि सचिवालयको इमेलमा पठाउन भनिएको छ।
प्रवास खबरलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यूएई एनसीसी यतिबेला आन्तरिक संकटमा गुज्रिरहेको छ। उसको अधिवेशनबारे केही सुरसार नै देखिदैन।
अहिले पदाधिकारीबीचमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । एक पक्षले अर्का पक्षलाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। योबीचमा यूएई एनसीसीले ३१ जुलाइभित्रै अधिवेशन गराउन सक्ने अवस्था देखिदैँन । यूएईबाहेका अन्य केही एनसीसीमा पनि आन्तरिक विवादले अधिवेशन तोकिएकै समयमा नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जुलाइभित्र अधिवेश नभए के हुन्छ ?
प्रवास खबरले विधानबमोजिम ३१ जुलाइभित्र अधिवेशन गराइ नयाँ नेतृत्व चयन गर्ननसक्ने एनसीसीलाई के कारवाही हुन्छ त ? भनेर एनआरएनए आइसीसीका एक उच्च पदाधिकारीसँग सोधपुछ गरेका थियो।
जवाफमा ती पदाधिकारीले ‘एनसीसीहरुले कुनैपनि हालतमा ३१ जुलाइभित्र अधिवेशन गराइसक्नुपर्ने, यदी त्यसो हुुननसके विधान नमान्ने एनसीसी उपर आइसीसीले जस्तोसुकै निर्णय लिनसक्ने’ बताए।
यद्यपि ती पदाधिकारी तोकिएकै समयमा एनसीसीले अधिवेशन सम्पन्न गराइ नयाँ नेतृत्व चुन्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउँछन्।
‘विधानलाई सबै एनसीसीले पालना गर्छन् भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ, त्यो गर्नैपर्छ ।’
यदी नभएमा आइसीसीको ‘एक्सन’ के त ? भन्ने प्रश्नमा ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘यसबारेमा आइसीसीको बैठकले निर्णय गर्नेछ।’